Shirkada Hormuud oo Shahaado Sharaf la gudoonsiiyay [Sawirro].
Sunday September 29, 2019 - 19:11:57 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kadib xaflad ballaaran oo ka dhacday magaalada Muqdisho ayay Ururada bulshada Rayidka ah abaalmarin ku guddoonsiiyay mid kamida shirkadaha isgaarsiinta ee ugu caansan dalka Soomaaliya.
Shirkadda Hormuud ayaa abaal marin ku mutaysatay adeegyada ay uqabato shacabka Soomaaliyeed, xafladda oo ay kasoo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo wasiirro katirsan dowladda Federaalka ayuu Ururka U abaal gud shahaadda sharaf ku guddoonsiiyay shirkadda.
Cabdixakiim Xasan Idow oo ka mid ah maamulka sare ee shirkadda Hormuud Telecom oo guddoomay shahaado sharafta ayaa xusay in garashada Shacabka soomaaliyeed shahaado noocaan ah siiyaan Hormuud ay tallaabo wanaagsan, waxa uuna u mahad celiyey dadkii u gartay shahaadadaan, iyo sidoo kale madasha U abaal-Gud oo xafladda soo qaban qaabisay.
Guddoomiye Cabdixakiim Xasan ayaa dhinaca kale khubadiisa ku soo qaatay qaar ka mid ah waxqabadka shirkadda Hormuud isagoona yiri "Hormuud Telecom waxay qayb wayn ka qaadatay kobcinta dhaqaalaha, waxayna sidoo kale shaqo abuur u samaysay in ka badan 30,000 Kun shaqaale ah, waxaana ganacsiyada soomaaliyeed ku maal-galinnay in ka badan 15 Million dollar.”.
Shirkadaha Diyaaradaha Qaaradda Afrika oo $400 Milyan Khasaaray Muddo 30 Cisho Gudahood Ah.